Baaq: Haddaanu nahay dhallinyarada Aadan Madoobe si weyn ayaan uga soo horjeednaa Suldaankaas la sheegayo caleemo-saarkiisa!
Baaq: Haddaanu nahay dhallinyarada Aadan Madoobe si weyn ayaan uga soo horjeednaa Suldaankaas la sheegayo caleemo-saarkiisa! 0 Tuesday 3rd January, 2017 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Guud Visits: 91
Haddaanu nahay dhallinyarada beesha Aadan Maxamed ee ku magacdheer "Aadan Madoobe" waxaannu halkan ka soo saaraynaa baaq aanu ku
Haddaanu nahay dhallinyarada beesha Aadan Maxamed ee ku magacdheer "Aadan Madoobe" waxaannu halkan ka soo saaraynaa baaq aanu ku mideysannahay (gude iyo debadba) Baaqaas oo aanu kaga soo horjeedno ninkii hore isugu cummaamaday Cheif Caaqilka, iminkana hunguri xumo ka hayso inuu uga dallaco "Suldaannimo”! isagoo ay dabada ka riixayaan walaalkii Kayse Cabdi Shaybe "mulkiilaha Shaybe motors” iyo adeerkii Cali Shaybe. Iyagoo dano khaas u ah sababteed u doonayo inay u af-duubaan beel weynte Aadan Maxamed ee sharafta iyo karaamada leh, uguna sadaqadeeyaan magacoodii iyo midnimadoodii. Taas oo ah meel-ka-dhac iyo waxaan loo dulqaadan karin. Haddaba annagoo ah aqoonyahankii iyo dhallinyaradii beesha Aadan Madoobe, kana midaysan rayigan, waxaanu halkan uga sheegeynaa nimankaas kor ku xusan inaanay sinaba u soconayn damacaa laab-lakaca ee ay doonayaan inay suldaannimo ugu cumaamadaan yarkaas buubaalka ah ee kii hore loogu cummaamadayba ku fashilmay, oo ka dhigan habartii xaabada qaadi kari weyday ee haddana u hollatay inay in kale ku darsato! Waxaanu leennahay arrintaasi wax-suurtaggeli karaya maaha! Yuuse suldaan u noqonayaa haddii aad aqal madow hoostiis ugu cummaamadaan mar kale?
Sababo ayaa jira aanu marleyba, ninkaasi ku noqon karin Suldaan. Sababahaas waxaa ka mida inuu yahay nimaan xilkaas culus ka soo bixi karayn. Waayo Suldaanka waxaa looga baahanyahay inuu yahay oo leeyahay sifooyin iyo hibooyin gaar u ah ama uu la wadaago dad yar. Sifooyinkaas waxaa ka mida inuu yahay oo noqdo: nin damala ah oo dad-isku-wad leh, nin cadaaliya oo la wada dugsado. Nin hiil, hoo iyo hadal karnimo leh oo beesha cadka ka maqan u soo dhicin kara, nin haybad iyo geed-joogsi leh, nin dul iyo deganaansho leh iyo inuu ugu danbeyn yahay nin nidaamka dhaqanka Soomaaliyeed u dhuun-daloola. Haddaba sidaynu wada ogsoonnahay ninkaasi waxaas oo sifooyin ah ee aynu is-dabo taxnay, nasiibdarro, waa ka wada qatanyey. Maxaa u dalliil ah? Waa u dalliil ah asbaabtan hoos ku qoran:
Muddo sannad ah ayuu Cheif caaqil ahaa. Muddadaas waxay si fiican uga dharagsanay tafaraaruqu ku dhacay beeshii midnimada ku caanka ahayd. Waxaynu xog'ogaal u nahay in raas ba meel fadhiyo oo aanay talo iyo tusmo toona wadaagin. Tan oo aan waligeed soo marin beeshan oo lagu maajeeran jiray is-jaceyl, isku-kalsoonaan, is-tixgelin, wax-wada-qabsi iyo isku talo. Haddaba ninkani ma damal dad-isku-wad leh baa? Miyuu se yahay hoggaamiye lagu soo hirto? Soo maaha kala-firdhiye? Ma ninkaas ayeynu suldaan ugu abaal-celinaa?
Dhallinyarada beeshani markay su'aalahaas, jawaabahooda rogrogeen ee ay dhan walba talada iska taageen. Isla mar ahaantaana u dhugyeesheen af-duubka meesha ka socda ee aan waxba la iskaga tirin qeybaha bulshada, hadday tahay qurbe-joog, aqoon yahan ama qeybaha kale ee tolkaba. Waxaannu go'aan ku gaadhnay inaanu si adag uga soo horjeesano suldaannimadaas macmalka ah ee la doonayo in la dhoob dhoobo. Waayo haddii tani hirgasho Aadan Madoobe danbe oo meel isugu imanayaa ma dhici doonto.
Wallaallayaal taasina waa halis iyo habaar u baahan in si-wada-jira looga hortago, si aan magacii iyo milgihii beesheennu ceel ugu dhicin aan dib looga soo saari karin. Ogaada oo waxaynu wax ku nahayna isku-duubnida iyo midnimada. Waxaa hubaal ah haddii aynu kala tagno inaan dib loo arki doonin Aadan Maxamed danbe oo ka dhex muuqda bulshada Somaliland iyo soomaali ba. Waa xaqiiq, maamuus danbe dib u yeellan mayno haddii aynu kala tafaraaruqno. Waanay dhacaysaa haddii wiilkaas aan irbad dhuubggelin karini suldaan loogu cummaamado.